Ohatrinona ny mitazona soavaly isam-bolana | Soavaly Noti
Ohatrinona ny mitazona soavaly isam-bolana
Monica sanchez | | About us
Mieritreritra ny hahazo soavaly ve ianao? Alohan'ny hanaovana na inona na inona dia zava-dehibe ny hahalalanao ny vidiny hitehirizana azy io amin'ny toe-javatra tsara, satria amin'ity fomba ity no hahafantaranao raha tena afaka miaraka amin'izany fandaniana izany ianao na raha, mifanohitra amin'izay no tsara kokoa dia miandry kely ianao.
Ary ny fikarakarana azy araka ny mahamety azy dia tsy mora. Betsaka ny zavatra ilainao mahasambatra, ary maro amin'izy ireo no tonga amin'ny vidiny lafo. Ka, andao jerena hoe ohatrinona ny mitazona soavaly.
Zava-manan'aina ity biby ity, ary noho izany mila andiam-pitandremana mba hananany fiainana mendri-kaja ary raha mbola azo atao. Tadidio izany, alohan'ny hividianana azy akory dia tsy maintsy manomboka manao banky piggy ianao. Avy eo dia holazainay aminao hoe ohatrinona ny fitazonana soavaly eo ho eo:
2.3 mpitsabo nify
2.4 Fandaniana hafa mety hitranga
Hiankina amin'ny taonan'ny biby sy ny asany izany. Fa mba hanomezana hevitra anao dia tokony ho fantatrao izao manaraka izao:
Ny maria bevohoka sy ny olon-dehibe dia manana fihinanana sakafo isan'andro eo anelanelan'ny 1,5 sy 2% amin'ny lanjany.
Lactating mares sy foals, eo anelanelan'ny 2 sy 2,5% amin'ny lanjany.
Ny ponies dia mahatratra hatramin'ny 1,5% amin'ny lanjany.
Ohatra, Raha milanja 600kg ny soavaly ary miasa mafy tokoa dia tokony hihinana feed 9kg sy forage 6kg isan'andro. Ity isam-bolana dia midika hoe 270kg famahanana sy 180kg fihinanan-kanina.
Ampiasaina amin'ny sakaosy 20kg ny fahana izay mitentina 30 euro eo ho eo; ary ny forage, raha mila mividy azy, dia amidy amin'ny alika kely na salantsalany izay mitentina 9 euro eo ho eo.
Mihinana ve ireo soavaly?
Mila vaksinina telo ny soavaly: ny tetanosy, ny gripa na ny gripa, ary ny rhinpneumonitis. Ny tsirairay amin'izy ireo Manodidina ny 35 euro ny vidiny ary tsara ny mitafy azy ireo indray mandeha isan-taona.
Ny lozisialy sy ny kongona, ary koa ny katsentsitra sy bibikely hafa dia mety hisy fiantraikany amin'ny soavaly. Mba hialana amin'izany dia tsy maintsy omena ravin-kazo voafaritra izy ireo, amidy amin'ny cubes 3kg ary manodidina ny vidiny 25-28 euro / taona.
Indraindray dia tsy ho ratsy ny mahita mpitsabo-nify. Ny fahita matetika tokony hitsidihanao dia In-1 isaky ny 2 taona, ary 65 Euro ny vidiny.
Fandaniana hafa mety hitranga
Raha manana colic, aretina na lozam-pifamoivoizana ilay biby, dia mila ny fanampian'ny mpitsabo biby izany. Raha toa ka, mila manangona 500 eo ho eo isan-taona ianao.
Ny fikojakojana ireo soavaly dia manodidina 50 euros isaky ny 2 volana.
Ho an'ny fampiofanana ny soavaly dia mila mandeha any amin'ny toerana mifanaraka amin'ny filànao ianao, noho izany, mila mandany bebe kokoa ianao. Na dia miovaova aza ny vidiny arakaraka ny faritra onenananao, dia eo izy ireo 160-300 euro isam-bolana.
Ny vidin'ny sakana dia ho avo kokoa na ambany arakaraka ny habeny sy ny kalitaony. Mba hahafantaranao bebe kokoa na latsak'izay vidiny, trano fitobiana nandrendrika 3,50 metatra ny halavany 2,30 ny haavony, mety ho an'ny soavaly kely sy soavaly kely, sahabo ho 450 euro ny vidiny.
Mba hisorohana ny olana dia tena tsara ny maka fiantohana ho an'ny soavaly, izay kely ny vidiny 80 euros isan-taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » About us » Ohatrinona ny mitazona soavaly isam-bolana
Angela Graña dia hoy izy:
Salama, tsy miasa ho antsika intsony ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity. Manana zana-boriky aho, araka ny hitanao amin'ny lahatsoratra navoaka farany (izay misy kalitao tsara kokoa satria talohan'ny tsy nisian'ny mpanoratra manokana) ary afaka mahazo colt iray purebred ianao amin'ny vidiny 2.000 euro tsy misy olana. Raha misy soavaly sarobidy na dia kely aza. Fa raha tianao hamboarina amin'ny fifehezana manokana izany dia ho lafo kokoa.
Mamaly an'i Ángela Graña
Araho hatrany satria havoaka vetivety ny lahatsoratra momba azy.
horse29 dia hoy izy:
TSARA Hividy soavaly ao anaty kely efa noresahina aho na mihoatra na latsaka tiako ho fantatra iray volana hoe ohatrinona ny soavaly no mihinana sy mandany, hatramin'ny nananganana ahy dia azoko maimaim-poana izany noho ny sakaiza sakaizako iray miarahaba ny sipako.
Ny ahy dia mahatalanjona, toetra tsara hitan'ny masoko, poe tsara, dingana tsara sns ary tsy dia mivoaka ny tena malalako raha mitady ianao mahita trinket, fiarahabana ary miandry ny valiny aho
Valiny amin'ny soavaly29
Jose Domingo dia hoy izy:
Salama, aza mino izay lazain'izy ireo momba ny vidin'ny fitazonana soavaly. Miankina raha afaka manana izany amin'ny toeram-piompianao manokana na amin'ny trano fandraisam-bahiny ianao. Raha io no tranga farany dia betsaka ny fampindramambola miaraka amin'ny vola 200 euro isam-bolana. Raha marina izany, ilay veterinera raha ilaina ny miantso azy dia aloanao isan-karazany izy. Misaotra an'Andriamanitra anefa fa tsy tonga matetika izany filàna izany. Soavaly miasa isan'andro, dia afaka mihinana sakafo 3 kg eo ho eo isan'andro, tia ny fihinanan-kanina azonao omena. Momba ny kg. Heveriko fa mety ho manodidina ny 50 cts io. Sarotra kokoa noho ny lafo io.
Mamaly an'i jose domingo
ger dia hoy izy:
800 isam-bolana amin'ny sakafo? HANDEHA HO AIZA IANAO!!!!! fa …… Aiza no alehanao !!!!!!!!! Azonao lazaina amiko hoe ahoana ny ivon-toeran'ny mpitaingin-tsoavaly izay manome vola anao 300 euro isam-bolana amin'ny zavatra rehetra….
Valiny tamin'i Ger
800 euro isam-bolana amin'ny sakafo? Hahahaha, avy taiza ianao no nahazoana an'izany? Miaraka amin'ny 120 euro / volana soavaly dia mihinana tsara
Izaho dia efa nitaingin-tsoavaly hatramin'ny fahazazako ary soavaly tsy mihinana firy, tsy maintsy omenao sakafo voalanjalanja telo isan'andro, ary koa raha omenao sakafo betsaka dia mety hisy colic ary misy soavaly tsy mila soavaly satria mafy volo ireo. Rehefa dinihina tokoa, ny fitazonana soavaly tsy dia lafo loatra, fa mila fanoloran-tena sy andraikitra.
Mamaly an'i aurora
Miriam dia hoy izy:
Ohatra, manana vavy vavy aho izay nitsambikina tamin'ny soavaly ary ankehitriny dia ao amin'ny toeram-piompiana tsy miankina izay mitentina € 250 isam-bolana ary misy sakafo ao, dia ny lavitra indrindra isaky ny 3-4 volana dia € 60 ary ny Vétéinario ho an'ny vaksin 30 € isan-taona izy ireo, ho an'ny soavaly ny fiantohana satria lalana kely io ary mitaingina any ihany aho.
Valiny tamin'i Miryam
SALVADOR MACIAS dia hoy izy:
AFARAINY TSARA, NAMAKY NY ARTIKELY IZAO IZAHAY IZAY tadiaviko soavaly ary te hanana loharanom-pahalalana momba izay mety ho volazaiko amin'ny fikarakarana sakafo sy ny fiantohana biby ary misy vokany izay tadiaviko $ 800 iray volana eo amin'ny sakafo ihany. VOLA, misy olona afaka manafatra ahy INONA NO AZONAO ampiasana bebe kokoa na tsy dia kely?
Valiny amin'i SALVADOR MACIAS
Fetsy mba hampamirapiratra ny volon'ny soavaly